युवारत्न: डा. विशाल! - Blogs of Sagar Prasai
युवारत्न: डा. विशाल!
Dr Bishal hugged by an old lady and Dr Bishal with his medal of honor
६ वर्ष अगाडी पाकिस्तान बाट कार्डियो सर्जन को पढाई बीच मै छोडेर नेपाल फर्किएपछि डा. विशाल ढकालले एउटा अचम्मको निर्णय लिनुभयो। राम्रो हस्पिटलमा डाक्टर भएर राम्रो पैसा कमाएर सजिलो जिन्दगी बिताउन सक्ने वहाँले आफै अस्पतालमा आएर स्वास्थ सेवा लिन नसक्ने बिरामीहरूलागी घरमै गएर त्यसतो सेवा दिनको लागी एउटा सामाजिक उद्धम सुरू गर्नुभयो। जसको नाम थियो- “हेल्थ याट होम”। वहाँले आफ्नो यसै सँस्था मार्फत घरघरै गएर बिरामीहरूका सामन्य भन्दा सामन्य स्वास्थ समस्याहरू हल गर्न थाल्नुभयो। यो काम सजिलो थिएन। कहिले काँहि त एकदमै सक्दै नसक्ने बृद्ध मान्छेहरूलाई डाईपर लगाईदिने सम्म काम गर्नुपर्थ्यो। वहाँको यस्ता काम देखेर- वहाँका आफन्तहरू खासै खुसी हुनुभएन। सब ले भन्नुहुन्थ्यो- “डाक्टर पढेर आयौ। काम चाहि कम्पाउन्डरको गर्छौ।“ यसको जवाफमा वहाँ भन्नुहुन्थ्यो-“मैले यसो गर्दा दुख परेको मान्छेलाई केहि सहयोग हुन्छ भने, कम्पाउन्डर नै सहि।“
तिनै डा. विशाल ढकाल, वैशाख १२ गतेको भुकम्प आएको भोलिपल्ट देखी नै भुकम्प प्रभावित मान्छेहरूलाई स्वास्थ सेबा दिन अनवरत खट्नुभयो। बिभिन्न व्यक्ति तथा सँस्थाहरूले चलाएर धेरैवटा अभियानहरूमा स्वास्थकर्मी भएर सहयोग गर्नुभयो। दबाईको अभाव हुन नदिन देशी-विदेशी स्वास्थकर्मीहरू सँग समन्व्य गर्नुभयो। शहर-गाउँ सबै तिर पुग्नुभयो। वहाँ भुकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने पहिलो नेपाली डाक्टर समेत हुनुभयो।
आज अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसको दिन डा. विशाल ढकालको “दुख परेको मान्छेलाई केहि सहयोग” गर्ने आफ्नो निरन्तर स्वभाव र सक्रियताका लागी युवा रत्न पुरस्कार बाट सम्मानित हुनुभयो। मलाई असाध्यै गर्व छ- कि म तपाईँको साथी हुँ डाक्टर सा’ब। धेरै बधाई तथा शुभकामाना!